Ikhosi yasimahla ye-gvSIG -Geofumadas
Ikhosi ye-gvSIG yamahhala
NgoFebruwari, 2011 Ukufundisa i-CAD / GIS, GvSIG
Ngoloneliseko olukhulu sinika ithuba elinikeziwe yi-CONTEFO yokusetyenziswa kwezifundo ze-10 zamahhala ze-GvSIG.
I-CONTEFO ngokubambisana noMbutho gvSIG unikezela ukukhuthazwa izifundo ezilishumi zamahhala Inqanaba lomsebenzisi. Ikhosi engqinelana nohambo lwesatifikethi "Umgangatho womsebenzisi"Ngethuba leeyure ze-60 ngexesha leeveki ze-6 kwifometha yefayili.
Ilottery yabucala iya kubanjwa phakathi kwazo zonke izicelo ezamkelweyo. Ukuze isicelo sakho samkelwe, kufuneka ugcwalise ifom yokuthatha inxaxheba ebonakala ku-www.contefo.com/novedades okanye www.contefo.com/moodle.
Ukwamkelwa kwezicelo kuya kuphelisa i-13 Matshi ka-2011.
Ikhosi iya kuqala ngoMatshi 18 we-2011.
Iirekhodi zokufunda ziyafumaneka
Injongo yale ntengiso kukuba abafundi bavavanye umgangatho wezifundo ezibonelelwa yi-CONTEFO, kuba umgangatho wabo yintsika esisiseko apho isenzo soqeqesho lwenkampani sakhiwe khona. Ukuza kuthi ga ngoku, ekuqaleni kwekhosi, kuya kuba sisinyanzelo kumfundi owenziweyo ukuba enze uphando kulindelo lwekhosi kunye novavanyo lwesibini lomgangatho ekupheleni kwekhosi.
Ukusukela ngoku, ukubhaliswa kwi-intanethi kwi-gvSIG-itafile yoqeqesho lweDesktop iya kuvulwa ngokusisigxina.
Sinqwenela inhlanhla kulo mdwebo.
Team Contempo UQeqesho noQeqesho lwezobuchwepheshe.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Vula izixhobo ze-CAD, izixhobo zokuhlela ze-gvSIG
Post Next Ukulinda i-Ipad 2Okulandelayo »